Maalinta Hooyada ee Ruushka | Safarka Absolut
Maalinta Hooyada waa ciid aad u qaas ah oo adduunka oo dhan looga xuso si loo xuso hooyooyinka oo dhan loona mahadnaqo jacaylka iyo ilaalinta ay siiyaan carruurtooda dhalashadooda.
Maaddaama ay tahay dabaaldeg caalami ah, waddan kasta waxaa looga dabaaldegaa maalmo kala duwan, in kasta oo jeneraalku guud ahaan caadi ahaan yahay Axadda labaad ee bisha Maajo. Si kastaba ha noqotee, Maalinta Hooyada ee Ruushka waxay dhacdaa taariikh kale. Ma jeclaan laheyd inaad ogaato sida looga ciido dalkan?
1 Waa sidee Maalinta Hooyada ee Ruushka?
2 Waa maxay asalka Maalinta Hooyada?
3 Goorma ayaa dalalka hooyo laga xusaa Maalinta Hooyada?
3.8 Boortaqiiska iyo Isbaanishka
Waa sidee Maalinta Hooyada ee Ruushka?
Maalinta Hooyada ee Ruushka waxay bilaabeen in loo dabaaldego 1998, markii uu ansaxiyay sharci hoosaadyada dawladihii Borís Yeltsin. Tan iyo xilligaas waxaa la qaban jiray Axadda ugu dambeysa Nofeembar sanad walba.
Maaddaama tani ay tahay dabbaaldeg si caddaalad ah ugu cusub Ruushka, ma jiraan dhaqanno soo jireen ah oo qoys walba u dabaaldegayo qaabkiisa. Si kastaba ha noqotee, caruurtu waxay sameeyaan kaararka hadiyadaha iyo farshaxan gacmeed si ay ugu mahadceliyaan hooyooyinkooda jacaylkooda una muujiyaan dareenkooda.
Dadka kale waxay sameeyaan casho qoys oo gaar ah halkaasoo ay hooyooyinku ku siiyaan ubax qurux badan oo ubax dhaqameed u ah calaamadda mahadnaqooda, oo ay weheliso farriin kalgacal leh.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, hadafka Maalinta Hooyada ee Ruushka waa in kor loo qaado qiyamka qoyska iyo macnaha qotada dheer ee jacaylka hooyooyinka ee carruurtooda iyo taa lidkeed.
Waa maxay asalka Maalinta Hooyada?
Waxaan ka heli karnaa asalka Maalinta Hooyada Giriiggii hore in ka badan 3.000 oo sano ka hor markii xaflado lagu maamuusayay Rea, hooyada titanic ee ilaahyada sida muhiimka u ah Zeus, Hades iyo Poseidon.
Sheekada Rea waxay sheegaysaa inay dishay seygeeda Cronos si ay u ilaaliso nolosha wiilkeeda Zeus, maxaa yeelay wuxuu cunay caruurtiisii ​​hore si aan looga tuurin carshiga sida uu ugu sameeyay aabihiis Uranus.
Si looga hortago Cronos inuu cuno Zeus, Rea waxay hindisay qorshe waxayna dhagax dhigtay xafaayad xafaayad u ah ninkeeda si uu u cuno, ayada oo rumeysan inuu yahay wiilkeeda intuu isagu si dhab ah ugu korayay jasiiradda Crete. Markii Zeus uu qaangaaray, Rea wuxuu ku guuleystey inuu Cronus cabo dheriga ka dhigay in caruurtiisa inteeda kale matagaan.
Jacaylka uu u muujiyay carruurtiisa darteed, Gariigtu waxay u sameeyeen maamuus. Markii dambe, markii ay Roomaaniyiintu qaateen ilaahyadii Giriigga sidoo kale waxay qaateen dabaaldegan oo badhtamihii bishii Maarso ayaa loo sameeyay saddex maalmood ilaahadda Hilaria ee macbudka Cibeles ee Rome (oo matalaysa Dhulka).
Markii dambe, Masiixiyiintu waxay u beddeleen ciiddan asalkeeda jaahiliga mid ka duwan si loo maamuuso Maryantii bikradda ahayd, hooyadii Masiixa. Quduusiinta Katooliga ah 8-da Diseembar Uur-ku-qaadista Nadaafadda ayaa loo dabaaldegaa, taariikh ay aminadan aaminka ahi qaateen si loo xuso Maalinta Hooyada.
Horeba qarnigii 1914-aad, madaxweynaha Mareykanka Woodrow Wilson wuxuu ku dhawaaqay XNUMX-ka Axadda labaad ee Maajo inay tahay Maalinta Hooyada rasmiga ah, tilmaam taas oo ka dhawaajisay dalal kale oo badan oo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee, waddamada qaar oo leh dhaqan kaatoolig ah ayaa sii waday inay xafidaan fasaxa bisha Diseembar inkasta oo Isbaanishku u kala saaray inuu u wareejiyo Axadda ugu horreysa bisha Maajo.
Goorma ayaa dalalka hooyo laga xusaa Maalinta Hooyada?
Dalkani wuxuu u dabaaldegaa Maalinta Hooyada oo ah Axadda labaad ee Maajo. Markii ugu horreysay ee sidaan ognahay u sameysay waxay ahayd Anna Jarvis oo lagu sharfayo hooyadeed oo dhimatay bishii Maajo 1908dii ee Virginia. Kadib, waxay u ololeysay inay aasaasto Maalinta Hooyada oo ah maalin qaran oo laga xuso Mareykanka, waxaana sidaas loogu dhawaaqay sanadkii 1910-kii West Virginia. Kadib gobolada kale si dhakhso leh ayey u raaci doonaan.
Faransiiska gudaheeda, Maalinta Hooyada waa dhaqan soo dhowaaday, tan iyo markii ay bilaabatay in loo dabaaldego XNUMX-meeyadii. Intaas ka hor, maalmaha qaar dadaallada haweenka qaarkood ee umushay carruur aad u tiro badan si ay gacan uga geystaan ​​dib u soo celinta dadka ku baaba'ay dalka ka dib Dagaalkii weynaa ayaa la aqoonsaday oo xitaa la siiyay billado sharaf.
Waqtigan xaadirka ah waxaa loo dabaaldegaa Axadda ugu dambeysa bisha Maajo illaa ay ku soo beegto Bentakostiga. Hadday sidaas tahay, Maalinta Hooyada waxay dhacaysaa Axadda ugu horreysa bisha Juun. Taariikhdu doonto ha noqotee, waa caado in carruurtu hooyooyinkood siiyaan keeg ubax u eg.
Waddankan Aasiya, Maalinta Hooyada sidoo kale waa xaflad ku cusub, laakiin in badan oo ka mid ah dadka Shiinaha ayaa u dabaaldega Axadda labaad ee Maajo iyagoo hadiyado iyo farxad badan la leh hooyooyinkood.
Maalinta Hooyada waxaa lagu xusaa Mexico si xamaasad leh waana taariikh muhiim ah. Dabaaldegu wuxuu bilaabmayaa maalin ka hor marka ay dhaqan u tahay carruurtu inay serenade ka dhigaan hooyooyinkood ama ayeeyadood, ama iyaga ayaga ama shaqaalaysiiya adeegyada muusikiistayaasha xirfadleyda ah.
Maalinta ku xigta waxaa la qabtaa adeeg kaniisad gaar ah oo carruurtuna waxay siiyaan hooyooyinkood hadiyadaha ay ku abuureen dugsiga iyaga loogu talagalay.
Boqoradda Holand ee Thailand, Majliskeeda Sirikit, ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay tahay hooyada dhammaan maadooyinkeeda Thai sidaa darteed dowladda dalka waxay u dabaaldegtay maalinta hooyada dhalashadiisa (Ogosto 12) ilaa 1976. Waa ciid qaran oo si heer sare ah loogu xuso bulalayr iyo shumacyo badan.
Maalinta Hooyada ee Japan ayaa caan ka noqotay Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib waxaana hadda loo dabaaldegaa Axadda labaad ee bisha May.
Fasaxan waxaa loogu nool yahay hab dhaqan iyo dhaqan ah. Caadi ahaan carruurtu waxay sawiraan hooyooyinkood, waxay u diyaariyaan suxuun ay ku barteen inay karsadaan sidoo kale waxay siiyaan carnations casaan ama casaan ah maadaama ay astaan ​​u yihiin daahirnimo iyo macaan.
Maalinta Hooyada ee Boqortooyada Midowday waa mid ka mid ah ciidaha ugu faca weyn Yurub. Qarnigii XNUMX-naad, Axaddii afaraad ee Soonka waxaa loo bixiyay Hooyo Axad iyada oo lagu sharfayo Maryantii bikradda ahayd. qoysaskiina waxay ka faa'iideysteen fursadda inay wada kulmaan, u aadaan masaajid iyo maalin wada qaataan.
Maalintan qaaliga ah, caruurtu waxay hadiyado kala duwan u diyaariyaan hooyooyinkood laakiin waxaa jira mid aan la seegi karin oo waa Simnel Cake, keeg miro macaan leh oo leh lakab almoon ah dusheeda.
Boortaqiiska iyo Isbaanishka
Labada Spain iyo Boortaqiiska labadaba, Maalinta Hooyada waxaa loo dabaaldegi jiray 8-da Diseembar oo ku beegan munaasabadda Uur-qaadista Nadaafadda laakiin ugu dambeyntii waa la kala qaybsamay oo labadii xafladood ayaa la kala saaray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maalinta Hooyada ee Ruushka